नागरिक एप: अब सरकारी सेवा हातहातमै - Naya Sanchar
काठमाडौं । के तपाँई सरकारी सेवा लिनुपर्दा अहिले पनि आवश्यक कागजात बोकेर कुनै कार्यालयमा घन्टौ लाइनमा बस्दै आउनुभएको छ ? हरेक कामपिच्छे आफ्ना महत्वपूर्ण कागजात फोटोकपी गरेर फाइल पनि त तयार गर्दै आउनुभएकै होला ! यस्ता झञ्झटलाई हटाउने गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम् प्रयोगलाई व्यापकता गराउँदै नेपाल सरकारले नयाँ एप्सको विकास र नमूना परीक्षण सुरू गरेको छ ।
उक्त एप्समा नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमध्ये कुनै एकको नम्बरलाई आफ्नो नाममा रहेको मोबाइलबाट एक ‘क्लिक’ गरेपछि त्यहाँबाट आफ्ना सबै विवरण स्वतः प्राप्त हुनेछ र त्यसैका आधारमा सम्बन्धित कार्यालय तथा सेवासँग सिधै पहुँच स्थापित हुनेछ ।
यो नयाँ कार्यक्रमले नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने सवै किसिमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवाप्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नागरिकले नागरिक एपबाट प्यान कार्डसम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरणसमेत मोबाइल सेटमार्फत नै जानकारी लिन सक्नेछन् ।
झन्झटको अन्त्य गर्ने पहल
कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यो एप्स यस क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण
“सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमै सरकारी सेवा” भन्ने उद्घोषसहित नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सो एप्सको ‘बेटा भर्सन’ परीक्षणका रुपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
नेपालका हरेक नागरिकलाई प्रविधिमार्फत् सरकारी सेवा सर्वसुलभ ढङ्गले मोबाइलबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएकोले नागरिक एप अधिकतम् प्रयोग गरी लाभ लिन मन्त्री गुरुङले आग्रह गर्नुभएको थियो ।
“लाइन होइन, अनलाइनबाट २४ सै घण्टा सरल, सहज र प्रभावकारी सरकारी सेवाका लागि नागरिक एप” भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको एपमार्फत् हेलो सरकारमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नागरिक एपबाट सेवा प्राप्त गर्न
नागरिक एपबाट सेवा प्राप्त गर्नका लागि ‘एन्ड्रोइड’ मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्ले स्टोर र आइफोन प्रयोगकर्ताले एक स्टोरबाट सो एप डाउनलोड गर्न सक्नेछन् ।
हाल आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरको आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सीममार्फत एपको प्रयोग गर्न सकिनेछ । उक्त सेवा प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता, मतदाता वा राहदानीमध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले परिकल्पना गरेबमोजिम सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा एकीकृत तथा अन्तरआवद्ध गरी सहज र प्रविधिमैंत्री बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यो नयाँ कार्यक्रमले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथै सहस्राब्दी विकास लक्ष्यसमेतलाई योगदान दिने ठानिएको छ ।
एपमा आगामी दिनमा मालपोत, भूमिसुधार, सवारी कर, चालक अनुमतिपत्रलगायतका आमनागरिकसँग सरोकार हुने सेवा थप गर्दै लगिनेछ । हाललाई परीक्षणका रूपमा अघि बढाइएको नागरिक एपवाट प्रवाह गरिने सरकारी सेवा पारदर्शी, भरपर्दो र सुरक्षित हुनेछ ।
नागरिक एप प्रयोग गर्ने कार्यविधि सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
फ्रेमवर्कले आठ वटा कार्यक्षेत्र (डोमिन) र ८० वटा क्रियाकलाप (पहल) भएको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनसँगै मूलुकमा जारी सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर नेटवर्क) बिछ्याउने कार्यले पनि तीव्रता पाइरहेको छ ।
फ्रेमवर्कमा सेवा प्रवाहमा चुस्तताका साथै विद्युतीय भुक्तानी, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, ट्राफिक व्यवस्थापन, उद्योग र वित्तियलगायत क्षेत्र समेटिएको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने प्रदेश १, २ र ३ मा पर्ने विभिन्न स्थानमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ ।
यो एप्स प्रयोग गर्न निक्कै सजिलो छ । स्मार्ट मोबाइलामा नागरिक एप्स डाउनलोड गरेपछि त्यसभित्र गएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । आफ्नो नाममा रहेको मोबाइल नम्बरबाट यो एप्स र यसमा रहेको सुविधा लिन सकिन्छ ।
मोबाइल नम्बर राखेपछि कसको नाममा दर्ता छ भनेर एप्सले स्वचालितरुपमा पत्ता लगाउँछ । नागरिकता नम्बरबाट नै एप्सले सम्बन्धित निकायको प्रणालीमा पहुँच बनाउन सक्छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सबै सेवा सुविधा क्रमशः यो एप्सबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने ६४ मध्य ४० बढी सेवा यही एप्सबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
कुनै पनि विवरण भर्नु र अपलोड गर्नु नपर्ने भएकाले पनि नागरिकलाई सजिलो हुनेछ । नागरिक एप्स चलाउन यती सजिलो छ की एक क्लीक गरेकै भरमा सम्बन्धित सरकारी सेवाका लागि आफैँ आवेदन भरिन्छ ।
यसको प्रयोगले नागरिको सहजताका साथै सुशासन, भ्रष्टचार न्यूनीकरण र सरकारको सञ्चालन खर्च कटौतीमा ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
धनकुटामा सुरु भयाे जेष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम
आयोगले कार्यान्वयनमा ल्यायो निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति
भारतबाट १० लाख डोज खोप आज नेपाल आइपुग्ने
Tags: #एप, #नागरिक
#आर्थिक आर्थिक ऐनले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न आग्रह